Kedu ihe ga-abụ ihe oyiyi mbụ nke Nexus Marlin na-apụta | Androidsis
Ihe oyiyi izizi nke Nexus Marlin pụtara
Ọ gaghị abụ okwu ọtụtụ izu mgbe anyị nwere ngosi nke Nexus abụọ ọhụrụ nke HTC mere, mbata nke gam akporo 7.0 Nougat n'ime ha na ọdịdị mara mma nke Allo na Duo, ozi ọhụrụ abụọ na ngwa ọkpụkpọ vidiyo sitere na Google. Oge okpomọkụ nke na-adọrọ mmasị karị na a ga-enwe ọtụtụ akụkọ ga-esi na ekwentị ndị ọzọ dị ka Note 7 na August 2.
Ugbu a bụ mgbe mpụta mbụ nke onyonyo nke otu ngwaọrụ Nexus pụtara nke HTC kere, onye Marlin. Nke a bụ koodu na nnọchite nke Nexus ọhụrụ nke anyị nwere ugbu a ihe oyiyi na-egosi gam akporo 'About' ihuenyo. Ihe a na-ahụbeghị bụ ọtụtụ ekwentị n'onwe ya, mana ị nwere ike ịmata ihe ga-abụ bezel dị gịrịgịrị n'elu nke na-echebe ekwentị ndị ọzọ.
Site na ihe oyiyi ndị ọzọ ị nwere ike ịhụ ihe aha nke ihe nlereanya ahụ ga-abụ. Obere N na-egosi dị ka ụdị gam akporo yana kedu ihe nchekwa nchekwa Google nke July 2016. Site na isi mmalite ekwuru na ekwentị nwere 128GB n'ime ebe nchekwa na nhazi ígwè pụrụ iche nke siri ike ịhụ na oyiyi a. Nkọwa ọzọ bụ na igwefoto adịghị apụ iche na nhazi nke ígwè azụ azụ, nkọwa zuru ezu iji tụlee.
Anyị enweela asịrị ndị ọzọ gbasara ekwentị a na ntapu nke tụrụ aro gịnị ga-enwe 5,5-anụ ọhịa Quad HD ihuenyo, Qualcomm quad-core chip, 4 GB nke RAM, igwefoto azụ 12 MP, nyocha mkpịsị aka, igwefoto n'ihu 8 MP na batrị 3.450 mAh nke ga-enye gị ike niile maka ụbọchị ahụ. Enwere olile anya na a ga-ekwenye na nkọwapụta na onyonyo a tụrụ aro nke Marlin n'oge adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ihe oyiyi izizi nke Nexus Marlin pụtara
Akwụkwọ afụ na Play Books na-ebuwanye oke okwu okwu n’egwuregwu
Ngwakọta zuru oke nke ihuenyo mkpọchi tinyere Launcher ka enyere gị site na Next tinyere akụ